Saliid & Gaas |Hal qayb oo ka mid ah Mamo Power Technology Co., Ltd.
Mamo POWER Diesel Generator Dess for OIL & GAAS BEERAHA
Xaaladda shaqada iyo shuruudaha deegaanka ee goobaha laga soo saaro saliidda iyo gaaska ayaa aad u sarreeya, taas oo u baahan awood xoog leh oo la isku halleyn karo oo ah qalabka korontada ku shaqeeya ee qalabka iyo hababka culus.
Qalabka korontadu waxa ay lama huraan u yihiin tas-hiilaadka xarumaha korontada iyo tamarta looga baahan yahay wax soo saarka iyo hawlgalka, iyo sidoo kale bixinta korantada kaydka ah haddii ay dhacdo in sahayda korontadu ay go'do, taas oo ka fogaanaysa khasaare maaliyadeed oo weyn.
MAMO POWER waxay qabataa koronto dhaliyaha naaftada loogu talagalay jawi adag si uu u wajaho deegaanka shaqada kaas oo u baahan in la tixgeliyo heerkulka, qoyaanka, joogga iyo xaaladaha kale.
Mamo POWER waxay kaa caawin kartaa inaad aqoonsato koronto-dhaliyaha ugu habboon adiga oo kula shaqayn doona si aad u dhisto xal koronto oo habaysan oo ku rakibida saliidda iyo gaaska, kaas oo ah mid adag, la isku halayn karo oo ku shaqaynaya kharashka hawlgalka ugu fiican.
Matoorayaasha MAMO POWER waxaa loogu talagalay xaaladda cimilada ugu daran, iyadoo si aad ah u hufan oo la isku halleyn karo si ay uga shaqeeyaan 24/7 goobta.MAMO POWER gen-sets waxay awood u leeyihiin inay si joogto ah u shaqeeyaan 7000 saacadood sanadkii.